Votoatiny: lakilen'ny famoahana bilaogy mpamono | Martech Zone
Zoma, Jona 6, 2014 Zoma, Jona 6, 2014 Douglas Karr
Ny fizarana atiny lehibe dia ho hery manosika ho an'ny orinasa hanangana ny fisian'izy ireo an-tserasera, hizara ny tantaran'izy ireo, ary hisarika, hirotsaka ary hivarotra amin'ny mpanjifa. Miara-miasa amina mpanjifa roa izahay izao izay niova ny paikadin'izy ireo ary tsy nizara atiny ara-pihetseham-po tamin'ny alàlan'ny sosialy izy ireo ary tsy nahazo anay namolavola horonantsary na infografika… ary ny fihenan'ny anjarany tamin'ny feo, mpitsidika, ary - farany - nitarika sy nihidy no nakatona. Ny atiny dia oksizenina ilaina mba hitazomana ny varotrao amin'ny Internet ho velona.
Ny bilaoginao dia mety ho fananana tsy mampino amin'ny famolavolana ny fisianao amin'ny Internet sy ny fahombiazanao. Amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba tsy miova, fametrahana sy fitazonana ny feonao miavaka, ary fanomezana atiny avo lenta sy ilaina ho an'ny mpamakinao, dia ho azonao antoka fa lahatsoratra amin'ny bilaoginao dia lahatsoratra mamono olona.
Ity dia infographic feno miaraka amin'ny zavatra zaraina betsaka… aza hadino ny mamaky azy io sy mampihatra ny lesona amin'ny paikadinao manokana amin'ny bilaogy. Topimaso tsara amin'ny fomba io, ny voankazo ambany dia mazàna tsy tratrarina, mametraka kalandrie atiny ary mamokatra atiny mifandraika izay mitondra fahatsiarovan-tena sy varotra.
Tags: bilaogyvotoatin'ny lahatsoratra bilaogyfitorahana bilaogypaikady fitorahana bilaogyantso ho amin'ny hetsikakalandrie atinypaikadin'ny bilaogy orinasalahatsoratra bilaogy mpamono olonafomba fitarihana
Ahoana ny fomba hanaovana doka amin'ny Pinterest
7 Jiona 2014 à 5:20
Torohevitra tsara momba ny votoaty, ireo andry efatra dia tena ilaina amin'ny famoronana votoaty tsara izay hanentana ny tsindry sy fizarana amin'ny tambajotra sosialy, izay amin'ny farany dia miteraka fiparitahana bebe kokoa amin'ny Internet. Misaotra tamin'ny fizarana ity infografika Douglas ity, tena ilaina izany.
Jun 8, 2014 ao amin'ny 10: 34 PM
Ny fisafidianana anaram-boninahitra mahasarika dia antony lehibe Douglas. Alefaso ny olona 😉 Misaotra!